दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको पर्खाइमा सिंहदरबार ! (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको पर्खाइमा सिंहदरबार ! (फोटोफिचर)
आर्यन धिमाल , १७ बैशाख २०७६
काठमाडौं। बैशाखको चर्को घाम, फलामै फलामको बीचको जंजिरले घेरिएको सिंहदरबारको छतमा रहेको 'सिंह' ले सायदै सोचेको थियो होला कुनै दिन मेरो हालत यस्तो हुनेछ।
तर कहिले काँही नसोचेको कुरा भइदिन्छ। सिंहदरबारको हकमा पनि त्यस्तै भयो २०७२ बैशाख १२को शनिबार। सिंह जंगलको राजा हो, यही प्रतिकात्मक भावलाई झल्को दिने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरले इ.स १९०३ मा सिंहदरबार निर्माण सुरु गरेका थिए।
चन्द्र शमशेरले निर्माण गरेको सिंहदरबारबाट आज पर्यान्त मुलुकको शासन व्यवस्था संचालित छ। तर २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सिंहदरबारको मूख्य भवनमा अवस्थित 'सिंह' शक्तिहीन झै प्रतीत हुन्छ। नहोस् पनि किन, विनाशकारी भूकम्पले शक्तिशाली सिंहदरबारलाई खण्डहरुमा परिणत गरिदियो।
त्यसपछिका चारवर्षमा सिंहदरबारको पुनः निर्माणका विषयमा विभिन्न छलफल, बैठक, सेमिनारका नाममा थाहा छैन कति बजेट खर्च भयो। तर सिंहदरबार पुनः निर्माणको पर्खाइमा आज पनि छ। तर आजको मितिसम्म पनि सिंहदरबार पुनः निर्माणको मोडल टुङ्गो लागेको छैन।
दलहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ छन्, कोही सिंहदरबार भत्काएर पुनः निर्माण गर्न चाहान्छन् भने कोही रेट्रो फिटिङ गरेर पुरानै अवस्थामा राख्न चाहन्छन्। तर सिंहदरबार भने पुनः निर्माणको व्यग्र प्रतिक्षामा छ।
यही सिंहदरबार अगाडिबाट दुई तिहाईको सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओली दैनिक विहान र बेलुका आवत जावत गर्छन्। अझ भूकम्प अगाडि त नेपालका सबै जसो प्रधानमन्त्री अहिले खण्डहरमा परिणत भएको यही सिंहदरबारमा बसेर शासन सत्ता चलाउँथे। तर दुर्भाग्य भनौं वा सौभाग्य, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले भने यो सिंहदरबारमा (सिंहदरबारको पुरानो भवन) बसेर शासन सत्ता चलाउने अवसर पाएनन्। सायद त्यही भएर होला प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारको पुनः निर्माणका विषयमा खासै चासो लिएको देखिदैंन। प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबार प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा पुरानो सिंहदरबारमाथि बसेको 'सिंह' ले प्रधानमन्त्रीलाई खिसी गरिरहेको भान हुन्छ।
उता सिंहदरबारकै पूर्वी र दक्षिण भागमा रहेको भवनलाई भने यतिबेला रेट्रो फिटिङ गर्ने कार्य भइरहेको छ। तर भत्किएको उक्त भवनमा कार्यालय संचालन भइरहेका कारण काममा ढिलाई भइरहेको प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रतीक प्रधानले जानकारी दिएका छन्। यो प्रोजेक्ट सक्न १८ महिनाको अवधि दिइएको थियो। ९ महिना गइसकेको छ।
प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रधानले भने– भवनमा कार्यालय संचालन भइरहेको छ, जसले गर्दा बेलाबेलामा कामै रोक्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। उनले यहि बैशाख भित्र संचालित कार्यालयहरु अस्थाई भवनमा सारिने र बाँकी ९ महिनामा भवनको रेट्रो फिटिङको सम्पूर्ण काम पनि सकिने बताए।